Amazwe ampofu ayenqaba imigomo yamahhala ye-COVID-19 enikezwa yi-UN
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Health News » Amazwe ampofu ayenqaba imigomo yamahhala ye-COVID-19 enikezwa yi-UN
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Amazwe ampofu anezinkinga eziningi ngokwamukela imigomo enikelwe kuwo. Abaningi abanawo amandla okugcina izimpahla ukuze bathole ukuthunyelwa futhi banezinkinga ngokukhipha imikhankaso yokugoma ngenxa yezinto ezifana nokungazinzi kwasekhaya kanye nengqalasizinda yokunakekelwa kwezempilo eqinile.
U-Etleva Kadilli, inhloko ye-Supply Division ye-UNICEF, i-ejensi ye-UN yokuthuthukisa impilo yezingane emhlabeni wonke, utshele IPhalamende laseYurophu ukuthi uhlelo lwe-COVAX, oluklanyelwe ukusiza amazwe ampofu ukuthi lugome abantu bawo ngokumelene ne-coronavirus, lusenkingeni, njengoba iminikelo eminingi yokugoma inesikhathi seshelufu esisele esifushane kakhulu ukuthi singasatshalaliswa ngendlela efanele.
Ngenyanga edlule iyodwa, imithamo engaphezu kwezigidi eziyi-100 enikezwe i- UNUhlelo lwe-COVAX kudingeke ukuba lunqatshwe abamukeli bosizo, iningi labo ngenxa yezinsuku zokuphelelwa yisikhathi ezisondelayo zemithi yokugoma.
Isikhungo ngokuhamba kosuku sathi izigidi eziyi-15.5 zemithamo eyenqatshwe ngenyanga edlule kubikwa ukuthi yacekelwa phansi. Okunye ukuthunyelwa kwenqatshwe amazwe amaningi.
Kepha izinsuku zokuphelelwa yisikhathi zemithi yokugoma enikelwe ohlelweni lokwabelana nazo ziyinkinga enkulu, kusho uKadilli. EU abenzi bomthetho.
“Kuze kube yilapho sesiphila eshalofini engcono, lokhu kuzoba yingcindezi emazweni, ikakhulukazi lapho amazwe efuna ukufinyelela abantu ezindaweni okunzima ukuzifinyelela,” kusho yena.
I-COVAX njengamanje isondela ekulethweni komthamo wayo wesigidigidi, kubika abaphathi bayo. I EU ilandisa cishe ingxenye yesithathu yemithamo ezilethwe kuyo kuze kube manje, kusho uKadilli.
The I-World Health Organization (WHO), ephethe ngokubambisana i-COVAX, ichaze kaningi usizo olungenalusizo olulutholile kubaxhasi phakathi nokuqoqwa kwemithi yokugoma amazwe acebile njengokwehluleka kokuziphatha.
Amazwe angamalungu angama-92 aphuthelwe umgomo we-WHO wokugoma ongu-40% ngo-2021 “ngenxa yenhlanganisela yokuhlinzekwa okulinganiselwe okuya emazweni anemali engenayo ephansi isikhathi esiningi sonyaka bese imigomo elandelayo ifika sekuzophelelwa yisikhathi futhi ingenazo izingxenye ezibalulekile - njengamasirinji,” WHO UMqondisi-Jikelele uTedros Ghebreyesus uthe ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela yokuphela konyaka ngoDisemba.
Abanye abagxeki bathi lolu hlelo lwalunamaphutha kusukela ekuqaleni ngoba luncike ekuphaneni kwabacebile esikhundleni sokuphoqelela ukutholakala okubanzi kwemithi yokugoma emazweni asathuthuka ngokususa izithiyo ezingokomthetho ezifana nokuvikelwa kwelungelo lobunikazi. Ibhiliyoni uBill Gates, onethonya kwezokunakekelwa kwezempilo emhlabeni wonke, ubekade ephikisana kakhulu nokukhumula ukuvikelwa kwelungelo lobunikazi emithini, yize isisekelo sakhe besibonakala sihambisana nemigomo ye-COVID-19 ngemuva kokugxekwa ngalesi sikhundla.
Januwari 14, 2022 ngo-23: 57
Gonywa noma kunjalo. Kuhle kuwe